DWG Isixhobo sokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Ukulungiswa kwe-AutoCAD kunye neSoftware yokuBuyisa kwakhona.
DataNumen DWG Recovery Ingaba i eyona AutoCAD DWG isixhobo sokulungisa kunye nokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwihlabathi. Ingayilungisa i-AutoCAD eyonakeleyo DWG iifayile kwaye uphinde ufumane idatha yakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela unciphisa ilahleko kurhwaphilizo lwefayile.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,618)
Ngoba DataNumen DWG Recovery?
Inqanaba lokubuyisela kwimeko yesiqhelo yimost Inqobo ebalulekileyo ye DWG imveliso kwakhona. Ngokusekwe kuvavanyo lwethu olubanzi, DataNumen DWG Recovery unelona zinga lifanelekileyo lokuchacha, ibhetele kakhulu kunayo nayiphi na enye into okhuphisana nayo kwintengiso!
Funda ngakumbi malunga nendlela DataNumen DWG Recovery utshaya ukhuphiswano
Isisombululo sokulandela iimpazamo ze-AutoCAD Ngenxa yokonakala DWG iifayile
Isisombululo "sokuzoba ifayile asisebenzi" Impazamo
Isisombululo se "Impazamo yangaphakathi [imeyile ikhuselwe]: EOutOfRange ”Impazamo
Isisombululo se “Non Autodesk DWG”Impazamo
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen DWG Recovery v3.0
Inkxaso yokufumana kwakhona i-AutoCAD R14 ukuya kwi-2021 DWG iifayile.
Inkxaso yokufumana kwakhona ezi zinto zilandelayo kwi DWG iifayile: IBHODI, IPHOYinti, I-LINE, I-ARC, ISETYHULA, I-ELLIPSE, i-SPLINE, i-XLINE, i-RAY, i-SOLID, i-3DFACE, i-LWPOLYLINE, I-POLYLINE (2D), I-POLYLINE (i-3D), I-POLYLINE (PFACE), I-POLYLINE (MESH), VERTEX (2D) , VERTEX (3D), VERTEX (MESH), VERTEX (PFACE), VERTEX (PFACE FACE), TEXT, MTEXT, TRACE, ATTRIB, ATTDEF, ENDBLK, SEQEND, INSERT, DIMENSION (ORDINATE), DIMENSION (LINEAR), IMIMISELO UKWENZISWA), DIMENSION (ANG 3-Pt), DIMENSION (ANG 2-Ln), DIMENSION (RADIUS), DIMENSION (DIAMETER), INKOKELI, ULAWULO, ULAWULO LWEBHODI, IBHODI YEBHODI, ICANDELO LOLAWULO LWEERAYI, ISITAYILI, STAYI ISITAYILI, ULAWULO LTYPE OBJ, LTYPE, JONGA ULAWULO OBJ, BONISA, UCS ULAWULO OBJ, UCS, VPORT ULAWULO OBJ, VPORT, APPID ULAWULO OBJ, APPID, DIMSTYLE ULAWULO OBJ, DIMSTYLE.
Inkxaso yokufumana kwakhona DWG umzobo osuka kwitempilerary iifayile xa kwenzeka intlekele yedatha.
Inkxaso yokuvelisa ifayile esisigxina kwi-AutoCAD R14 ukuya kwifomathi ka-2017.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa iAutoCAD DWG ifayile kunye nemenyu yokuqulathiweyo yeWindows Explorer ngokulula.
usebenzisa DataNumen DWG Recovery Ukufumana kwakhona i-AutoCAD eyonakeleyo DWG iifayile
Xa i-AutoCAD yakho DWG iifayile zonakele okanye zonakele kwaye awukwazi ukuzivula ngokwesiqhelo, ungasebenzisa DataNumen DWG Recovery ukuskena ifayile ye DWG iifayile kwaye ufumane kwakhona idatha eninzi kubo.
Phawula: Phambi kokufumana kwakhona ukonakala okanye ukonakala dwg Iifayile nge DataNumen DWG Recovery, nceda uvale naziphi na ezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile ye- dwg iifayile.
Khetha eyonakeleyo okanye eyonakeleyo dwg ifayile eya kufunyanwa:
Ungafaka igalelo dwg igama lefayile ngqo okanye ucofe i
iqhosha lokufumana dwg ifayile eya kufumaneka kwakhona kwikhompyuter yendawo.
Ukuba uyazi ifomathi yomthombo yonakele DWG ifayile, emva koko unokuyichaza kwibhokisi yokudibanisa:
Ngokuzenzekelayo, icwangciselwe "Ukuzimisela ngokuzenzekelayo", oko kukuthi DataNumen DWG Recovery iya kuhlalutya kwaye ichonge ifomathi yayo ngokuzenzekelayo.
Okwangoku ezi fomati zilandelayo ziyaxhaswa kwimithombo yolwazi DWG iifayile:
I-AutoCAD 2013-2017 DWG format
I-AutoCAD 2010-2012 DWG format
I-AutoCAD 2007-2009 DWG format
I-AutoCAD 2004-2006 DWG format
I-AutoCAD 2000-2003 DWG format
I-AutoCAD i-R14 DWG format
Ngokuzenzekela, DataNumen DWG Recovery iya kugcina i-fixed dwg ifayile kwifayile entsha enegama elithi xxxx_fixed.dwg, apho i-xxxx ligama lomthombo dwg ifayile. Umzekelo, kumthombo dwg ifayile yonakele.dwg, igama elingagqibekanga lefayile emiselweyo iya konakaliswa -Fixed.dwg. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
Ukuba imveliso esisigxina inefayile.DWG ulwandiso, emva koko DataNumen DWG Recovery iya kuyikhupha DWG ifomathi.
Ukuba imveliso esisigxina inokongezwa kwe-DXF, emva koko DataNumen DWG Recovery iya kuyikhupha kwifomathi ye-DXF.
Ungacacisa imveliso efomathiweyo kwifomathi yebhokisi:
Ngokuzenzekelayo, ukuba awuchazanga ifomathi yefayile yemveliso, emva koko DataNumen DWG Recovery izakusebenzisa ifomathi efanayo njengomthombo DWG ifayile.
Okwangoku ezi fomathi zilandelayo ziyaxhaswa:
iqhosha, kwaye DataNumen DWG Recovery Ndiza start ukuskena nokufumana kwakhona imvelaphi dwg ifayile. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukuba ngaba umthombo dwg ifayile inokuphinda ifumaneke ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Ngoku ungavula i-fixed dwg ifayile ene-AutoCAD okanye enye dwg eziluncedo.
DataNumen DWG Recovery 3.0 ikhutshwa ngoMeyi 3, 2021
DataNumen DWG Recovery 2.1 ikhutshwa nge-16 kaDisemba, 2020
DataNumen DWG Recovery 1.9 ikhutshwa nge-4 kaNovemba ngo-2020
DataNumen DWG Recovery 1.8 ikhutshwa nge-30 kaJuni, 2020
Inkxaso yokufumana kwakhona i-AutoCAD 2018 ukuya kwi-2021 DWG iifayile.
DataNumen DWG Recovery 1.7 ikhutshwa nge-19 kaNovemba ngo-2019
DataNumen DWG Recovery 1.6 ikhutshwa nge-19 ka-Epreli 2018
Inkxaso yokufumana kwakhona i-AutoCAD 2015 ukuya kwi-2017 DWG iifayile.
DataNumen DWG Recovery 1.5 ikhutshwa ngoMeyi 29, 2014
Inkxaso yokufumana kwakhona i-AutoCAD R14 ukuya kwi-2003 DWG iifayile.
Ukulungisa kunye nokufumana kwakhona umfanekiso weFotohop owonakeleyo (PSD, PDD) iifayile.